Gudoomiyaha La-dagalanka Qaadka oo Maanta lagu soo Dhaweeyay Magaalada Qardho “SAWIRRO” – Radio Muqdisho
Gudoomiyaha La-dagalanka Qaadka oo Maanta lagu soo Dhaweeyay Magaalada Qardho “SAWIRRO”
Gudoomiyaha la-dagalanka Qaadka Abuukar Cawaale Qaaddiid ayaa maanta lagu soo dhaweeyay magalada Qardho xarunta Gobalka Karkaar.
Mamulka Gobalka Karkaar, kan degmada Qardho iyo dadweyne kale ayaa duleedka magalada kaga hortagay Qaaddiid iyo wafdiga uu hoggaaminaya, halkaasoo uu markii danbe kulan kula qaaday haweenka Gobolka iyo qaar ka mid ah Odayaasha dhaqanka.
Ugu horeyntii duqa magaalada Qardho Maxamed Siciid Hoggaama-laroor ayaa sheegay inuu ku faraxsanyahay imaanshaha Cawaale ee magaalada, ayna sidoo kale soo dhaweynayaan Olalaha la-dagalanka Qaadka oo uu soo gaarsiiyay Gobolka Karkaar.
Qaar ka mid ah haweenkii iyo Odayaashii kulanka soo dhaweynta ah kasoo qeyb galay ayaa sheegay inay ku faraxsanyihiin wacyi galinta la-dagalanka Qaadka, waxeyna sidoo kale sheegeen inay muhiim tahay sidii jiilasha soo socda looga cirib tiri lahaa qaadka lagu soo daabulayo maalin kasta goboladda Soomaaliya.
Gudoomiyaha la-dagalanka Qaadka Abuukar Cawaale ayaa u mahad celiyay dhamaan dadkii ka qeyb galay soo dhawayntiisa, wuxuna sidoo kale u mahad celiyay mamulka, macalimiinta iyo ardayda Jaamacadda Bariga Africa faraceeda Qardho oo qeyb weyn ka qaatay soo dhaweyntiisa.
Cawaale wuxuu sheegay inuu wado wacyi galin ka hor tageysa dhibaatooyinka Qaadka, wuxuuna Hooyooyinkii kulanka joogay ku tilmaamay inay yihiin laf-dhabarka Qoyska loona baahan yahay inay wacyi galinta kaalin muuqata ka qaataan.
Arrimaha uu Qaaddiid sheegay inay muhiim tahay in hada la qabto ayuu ku sheegay inay tahay in goobaha Qaadka lagu gado laga saaro magaalada oo loo sameeyo goob caan ah, si dadka magaalada ku nool ay uga nabad gallaan dhibaatooyinka Qaadka.
Kulan weyn ayaa caawa lagu qabanayaa Jaamacadda Bariga Africa Qardho, halkaasoo lagu soo bandhigayo khudbado la xariira Qaadka iyo saameynta uu dadka iyo dalka ku yeeshay.
Arsenal oo Xajisatay Kaalinta Sedaxaad ee Horyaalka Ingiriiska “SAWIRRO”